Akara - APICMO CDMO Nnocha
ngwaahịa > Heterocycles
Uzochi bu uzo di iche iche, na otutu ihe ndi ozo, na n'akụkụ nile nke ndu anyi. N'ọdịdị, ha na-ahụ n'ụdị dị iche iche, ha nwekwaara ihe dị mkpa nke dị ndụ - "mkpụrụ ndụ nke ndụ." Ngwa nke heterocycles nke sitere na kemistri, usoro ndu, nkà mmụta ọgwụ, ugbo, na ụlọ ọrụ bụ legion.
Ngwunye heterocyclic ma ọ bụ mgbanaka mgbanaka bụ akụkụ nke cyclic nke nwere ụdị nke ọ dịkarịa ala abụọ dị iche iche dịka ndị òtù ya (s) .Yerorocyclic chemistry bụ alaka nke kemịkal kemịkal na-ekwu banyere njikọ, Njirimara, na ngwa nke usoro ọgwụgwọ ndị a.
Ihe atụ nke oghere heterocyclic gụnyere ihe niile acids nucleic, ọtụtụ n'ime ọgwụ ọjọọ, ọtụtụ biomass (cellulose na ihe ndị metụtara ya), na ọtụtụ ihe eji emepụta akwa
egosi 1-12 of 21 pụta